TALATA 17 SEPTAMBRA 2019
TAMBAJOTRA MPAMAKY FASANA : Naiditra am-ponja izy valo mianadahy
Ny alatsinainy 03 jona 2019 tokony ho tamin’ny valo ora alina lasa teo dia naharay tatitra ny tobim-paritry ny zandarimaria nasionaly tao Manjakandriana fa misy olona tsy fantatra mihaodihaody amin’iny Kaominina Ambohibary iny. 13 juin 2019
Nandefa zandary mba hanao ny fisafoana ny kaomandin’ny tobim-paritra ny alin’io ihany, ka tokony ho tamin’ny valo ora maraina dia nisy mpandalo nahatsikaritra ireo olona roa nampiahiahy ireo ka niantso avy hatrany ny mpanao fisafoana. Nanao ny ezaka rehetra ireto zandary hisamborana ireo olona ireo. Tratra teo amin’ny toerana antsoina hoe Bevava manamorona ny lalam-pirenena faharoa ireo lehilahy roa raha nikasa ny hihazo an’ Antananarivo.
Rehefa natao ny famotorana sy ny fisavana azy ireo dia tsikaritry ny zandary ny fihetsika mampiahiahy nasehon’izy roalahy ireto satria nikasa ny hamoaka antsy tao anaty sakaosy izy ireo mba hanoherana. Nosamborina avy hatrany izy mirahalahy ireo ary nentina tany amin’ny birao mba hanaovana ny fisavana bebe kokoa, tra-tehaka nandritra ny fisavana ny tapa-by maromaro sy “ barre à pince”, “barre à mine” ary vola tsangan’olona. Rehefa nanontaniana ny ampiasana ireo fitaovana ireo dia niaiky izy mirahalahy fa fitaovana fitondrany mamaky fasana izy ireo. Ny talata 04 jona 2019, dia nanao tatitra ny olona tao Ambohibary fa nisy fasana roa vaky teny amin’ny manodidina. Rehefa nalaina am-bavany izy roalahy ireo dia niaiky fa izy no nanatanteraka ireo vaky fasana ireo.
Ho fanohizana ny fanadihadiana dia niroso tamin’ny fisavana ny tranon’izy roa lahy ireo. Tamin’ny alalan’ny fanadiadiana izay nataon’ny avy ao amin’ny Vondron-tobim-paritry ny zandarimaria eny Imerinafovoany ihany koa no nahafantarana olona iray ankoatra azy ireo izay naman’izy roalahy ireo ihany. Rehefa natao ny fanadihadiana momba io olona iray io dia nilaza anarana olona roa hafa ihany koa izy izay namany mpiara-mamaky fasana aminy. Rehefa nampahafantarina an’ireo roalahy tratra tamin’ny voalohany izany trangan-javatra izany dia nanamafy izy ireo fa efa niaraka taminy ireo olona voatonona ireo, ary mbola nanonona olona roa hafa ihany koa izy.
Nandritra ny fanadihadiana natao azy ireo hatrany dia samy niaiky ny heloka vitany izy ireo ary nilaza fa izy ireo avokoa no namaky ny fasana tamin’ny faritra maro manodidina an’Antananarivo, Manjakandriana, Andriapamaky, Talata Volonondry Ambohimangarova/Avaratra, Antsefahy, Andoharanofotsy, Ankadivoribe, Ambohibary ary Antsirabe sy ny maro hafa. Efa natolotra ny Fitsarana ireo olona ireo ary efa naiditra am-ponja vonjimaika daholo ka fito nalefa any Tsiafahy ary vehivavy iray eny Antanimora.
Tratra teo am-panaovana ny asa ratsiny ireo jiolahy HALATRA VY TAO AMIN’NY ORINASA IRAY (189) 11 septembre 2019 Zatovo miisa 15 namono mpirahalahy, namoy ny ainy ilay zokiny ary nalemy ilay zandriny ITAOSY (177) 13 septembre 2019 Voasambotra ilay mpanendaka rehefa nifanena tamin’ilay vehivavy efa lasibany ITAOSY (172) 11 septembre 2019 Mpivarotra sakafo miisa 280 very vola an-tapitrisany LAMESA TENY SOAMANDRAKIZAY (142) 11 septembre 2019 Efa tonga any Espagne ireo teknisiana iraka manokana HOTOLORANA LOHA-MASININA VAOVAO NY FCE (120) 12 septembre 2019 Véronique Zava no kandidan’IRD ao Fenoarivo-Atsinanana FIFIDIANANA BEN’NY TANANA (97) 12 septembre 2019